DaVinci Resolve စတူဒီယိုသည် Kmart အတွက် National Broadcasts Spot များကိုအသုံးပြုခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Kmart များအတွက်အဆင့်အမျိုးသားအသံလွှင့်ဆိုင်များအသုံးပြု DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယို
Kmart များအတွက်အဆင့်အမျိုးသားအသံလွှင့်ဆိုင်များအသုံးပြု DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယို
Fremont, CA - ဖေဖော်ဝါရီလ 28, 2018 - Blackmagic ဒီဇိုင်း ယနေ့ DaVinci စတူဒီယိုတန်းဖို့ချီကာဂိုအခြေစိုက်ကိုလိုနီများ၏ Colorist Lauren မာလီကအသုံးပြုခဲ့သည်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်လက်လီကုမ္ပဏီကြီး Kmart များအတွက်အများအပြားအမျိုးသားရေးထုတ်လွှင့်အစက်အပြောက်ပြီးစီးကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဖန်တီးမှုအယ်ဒီတာအဖွဲ့နဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သား 2017 တစ်လျှောက်လုံးအတွက်ရာသီအလိုက်အစက်အပြောက်ကယ်နှုတ်ပုတ်များနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအစက်အပြောက်အကြောင်းအရာအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနေစဉ်, ထိုသူအပေါင်းတို့သည် Kmart အမှတ်တံဆိပ်မှမရှိမဖြစ်အလားတူခံစားမှုရှိခဲ့ပါသည်။
"Kmart ကြည့် ဖိတ်ခေါ်. , သာယာသောနှင့်အတူအလွန်မထားဘဲအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကသဘာဝခြုံငုံတည်းခိုပေမယ့်အရောင်များနတေုနျးရုတျတရကျနှင့်ပြည့်နှက်ခံခဲ့ရတာသေချာပါစေတော်မူသည်" မာလီကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ကကျိန်းသေ viewer ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲခြင်းနှင့် Kmart ပျော်စရာအမှတ်တံဆိပ်သည်မည်မျှခြုံငုံထင်ဟပ်သောအကောင်းတစ်ဦးစိတ်ဓါတ်များ၌ထားတော်မူ၏ချင်တယ်။ သူတို့ကကြားနေရိုက်ကူးနှင့် colorist သည့်ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်အတူမြို့ကိုသွားခွင့်နှင့်အတူကြီးမြတ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, မခွဲခြားဘဲငါရင်ဆိုင်နေရတာအရာကိုငါ DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းစိုးရိမ်ရန်ရှိသည်ဘူး။ အဲဒါကိုနဲ့စတင်မယ့်အစိုင်အခဲအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်သူကအပ်ဒိတ်အဖြစ်အရာအားလုံးကိုပိုမိုမြန်ဆန်, ချောမွေ့ရဖို့ဆက်လက်နှင့် sleeker မသာ။ ကျနော်တို့ဗားရှင်း 12.5 အပေါ်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းကြော်ငြာတွေပေါ်မှာ အသုံးပြု. မရရှိနိုင်ခဲ့တခါ 14 မှ switched ။ "
အခြို့သောရာသီမှတိကျသောအသီးအသီးအစက်အပြောက်နှင့်အတူ, မာလီဟာရူပဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ themes များထင်ဟပ်သေချာဖို့အထူးအာရုံစိုက်မှုပေးဆောင်။ "တစ်ဦးစိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့အစိမ်းရောင်နောက်ခံဆန့်ကျင်တိရိစ္ဆာန်များဆူညံသံအောင်တစ်ဦးချင်းလူသား, အမြိုးသမီးတနှင့်ကလေးတပ်ဆင်ထား '' သဘာဝတောင်းဆို '' ။ : မာလီ" သဘာဝတရားတောင်းဆို "နှင့်" Cannonball "နှစ်ခုနွေရာသီအစက်အပြောက်နောက်ကွယ်မှဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ ကနွေရာသီအစက်အပြောက်င်ကြောင့်အစိမ်းရောင်သဘာဝအကောင်းဆနျ့ကငျြဘနှင့်အတူစောင့်ရှောက်စဉ်, ငါတို့သည်တကယ့် pop ချင်တယ်။ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းအဖြစ်ရေကူးကန်တပ်ဆင်ထားသည့် '' Cannonball, ', ကြှနျုပျတို့နောက်တဖန်ကတောက်ပ cheery နှင့်မျက်စိ-ဖမ်းနွေရာသီရောင်ပြန်ဟပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်ကစူပါဖိတျကွညျ့ရှုစေရန်ရေကူးကန်အတွက်ဘလူးတွန်း။ "
ရိုက်ချက်များ finessing သည့်အခါမာလီ DaVinci ဖြေရှင်းရန်စတူဒီယိုရဲ့ပါဝါ Windows နှင့် tracker တွင်တစ်ပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ "ဒါဟာင်းဒိုးအရောင်ကိုတက်ပစ်နှင့်တန်းကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူသည်။ ဒါဟာအစဉ်အမြဲငါကိုသုံးဖူးတဲ့အကောင်းဆုံးခြေရာခံခြင်း tool ကိုဖွင့် "ဟုသူမကဆိုသည်။ "ငါသည် node များ၏ခြုံငုံစီးဆင်းမှုကိုချစ်ပြီးလျင်မြန်စွာအလွှာများနှင့်ပြတင်းပေါက်များပေါင်းထည့်နိုင်ဖြစ်ခြင်း, အဖြစ် Qualifier အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များထွက်ကြို။ ဒါဟာချောမွေ့စွာလုပ်ငန်းအသွားအလာပါပဲ။ "
အားကစားအဖွဲ့သည်အဝတ်အမျိုးမျိုးအတွက်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမကို featuring ကဆြုံးရဲ့ "ထိပ်တိုက်တွေ့" အစက်အပြောက်အတွက်ကြောင့်အဝတ်အစားပေါ့ပ်စေရန်အရေးကြီးပါသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ကောင်းတဲ့နှင့်ကြားနေနံရံစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အဝတ်များ၏လီဗာပူးနှင့်ဘလူးတကယ်ကြည့်ရှုသူမှာလာချင်ခဲ့တယ်," မာလီမှတ်ချက်ချသည်။ "သင်တန်းကသူတို့ကိုထိခိုက်စေပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်ကြောင့် colorist အဖြစ်ပျော်စရာစိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည့်ထပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်တွေအများကြီး, ရှိခဲ့သည်။ "
မာလီလည်း DaVinci ဖြတ်တောက်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျသောရိုက်ချက်များကိုဆင်းချိုးထားတဲ့စတူဒီယိုရဲ့ရှုခင်းဖြတ်ထောက်လှမ်း tool ကို, ဖြေရှင်း, သူမ၏လုပ်ငန်းအသွားအလာဖို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးအကြပ်အတည်းနေကြသောအခါ "ဒါဟာအံ့သြဖွယ်အချိန်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးနီးပါးငါ၏အမှု၏တင်းကျပ်စွာဘာလဲဆိုတော့အချိန်ပေါ်ပြုမိသည်နှင့် DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်း, ခြုံငုံဖြစ်စဉ်ကို streamlines ငါ့ကိုတင်သွင်းခွင့်နှင့်ရိုက်ကူးစုစည်း, ဘာလဲဆိုတော့အချိန်ကို set up, တည်းဖြတ်မူများကိုသို့မဟုတ်အသစ်ဗားရှင်းနှင့်ပိုပြီးပါစေ။ client များဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ခြင်း node များဆန့်ကျင်ဘက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ဗားရှင်းခြေရာခံစောင့်ရှောက်ခြင်း, ရိုက်ချက်များကသေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးမှတဆင့်သွားအခန်းထဲမှာအခါအထူးသဖြင့်, DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းလွယ်ကူစေသည်, အရည်နှင့်အရောင် session ကိုအကျိုးရှိစွာ။ "
မာလီ DaVinci စတူဒီယိုဖြေရှင်းခြင်းမပြုမီ, ကိုလိုနီခေတ်အရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်သို့ delved ဘူး "ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ ကြှနျတေျာ့ကို add နိုင်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ repertoire ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခု All-In-One ဆိုင်ပိုဖြစ်ထွက်ခွဲထွက်ခွင့်စီးပွားဖြစ် post ကိုထုတ်လုပ်မှုအိမ်သူအိမ်သားအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းတက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ကိုသူတို့ရှာနေဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများကိုများအတွက် All-အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖြေရှင်းချက်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များကိုတင်ပြနိုင်တယ်။ "
မာလီများအတွက်နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုအစက်အပြောက် "$ 10 လက်ဆောင်များ" တဦးတည်းအရည်ရိုက်ချက်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးတစ်ခု All-အဖြူရောင်နောက်ခံဆန့်ကျင်သီဆိုမယ့်တီးဝိုင်း, featuring တစ်အားလပ်ရက်အစက်အပြောက်ခဲ့ပါတယ်။ "ဒီမြေတပြင်လုံးအစက်အပြောက်ကအလင်းရောင်တစ်လျှောက်လုံးပြောင်းလဲနေတဲ့သူတို့နှင့်အတူ circles အဖြစ်တီးဝိုင်းအပေါ်သော့ခတ်ကင်မရာနှင့်အတူတဦးတည်းကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကကြည့်ရှုသူအာရုံမဟုတ်ဘူးဒီတော့ခြုံငုံတန်းချောမွေ့စွာဖြစ်ခဲ့သည်သေချာစေရန်လိုအပ်ဒါကြောင့်ကင်မရာပတ်ပတ်လည်သို့ သွား. အကြိမ်တိုင်းငါအလင်းရောင်နှင့်ခြုံငုံကြည့်ကိုက်ညီမှတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားတန်းအဖြစ်ကုသ "ဟုသူမကဆိုသည်။
"ကျွန်မအတော်ကြာအဆင့်တစ်လျှောက်လုံးသွားတာပေါ့နှင့် DaVinci စတူဒီယိုရဲ့ပြင်ဆင်ရန်စာမျက်နှာကိုဖြေရှင်းသုံးပြီးငါအဲဒါကိုခဲ့တရိုက်ချက်များကဲ့သို့ခံစားမိစေရန်အကူးအပြောင်းဖြတ်ပြီးပျော် tool ကိုသုံးပြီး, အတနျးအကြားပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့တယ်" ဟုသူကဆက်ပြောသည်။ "ငါသည်လည်းအချို့သောတည်းဖြတ်ရေးပြုပါ, ဒါကြောင့်ငါ tools တွေ, အဓါး tool ကိုကဲ့သို့အခြားအကြိုက်ဆုံးတစ်ခုအယ်ဒီတာမှအလိုလိုသိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါချောမွေ့စွာစာမကျြနှာဂမ်နှင့်ပြီးသွားသည်တည်းဖြတ်ရေးအကြားနောက်ကျောနှင့်ထွက်အကူးအပြောင်းနိုင်ပါသည်။ ကိုချစ်"
DaVinci ၏ကုန်ပစ္စည်းဓါတ်ပုံစတူဒီယိုအပေါင်းတို့နှင့်တကွအခြားအဖြေရှင်း Blackmagic ဒီဇိုင်း ထုတ်ကုန်မှာရရှိနိုင်ပါ www.blackmagicdesign.com/media/images
Colourlab Ai သည်ဥာဏ်ရည်စွမ်းအားဖြင့်အရောင်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည် - စက်တင်ဘာလ 8, 2020
Maxon ကရုပ်ရှင်ရုံ 4D R23 ကိုကြေငြာခဲ့သည် - စက်တင်ဘာလ 8, 2020
DaVinci Resolve စတူဒီယိုနှင့်အတူတစ်ခုတည်းယူပါ။ “ နောက်ဆုံးခေါ်ဆိုမှု” အရောင်များ - စက်တင်ဘာလ 3, 2020
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-02-28
ယခင်: Wisycom RF Solutions ပရီးမီးယားလိဂ်တပ်အားကစားပြိုင်ပွဲအသံလွှင့်များအတွက် Track မှယူပါ
နောက်တစ်ခု: စတူဒီယို / ထုတ်လုပ်ခြင်း International